Rwiyo Rwekukwidza. 132 Haiwa Jehovha, yeukai DhavhidhiNekutambura kwake kwese;+ 2 Kupika kwaakaita kuna Jehovha,Mhiko yaakaita kune Ane Simba waJakobho achiti:+ 3 “Handizopindi mutende rangu, mumba mangu.+ Handizorari panzvimbo yandinorara, pamubhedha wangu; 4 Handizobvumiri maziso angu kubatwa nehope,Kana kubvumira maziso angu kutsimwaira, 5 Kusvikira ndawanira Jehovha nzvimbo,Pekugara pakanaka peAne Simba waJakobho.”*+ 6 Onai! Takanzwa nezvayo tiri muEfrata;+Takaiwana musango.+ 7 Ngatipindei maanogara;*+Ngatikotamei pachitsiko chetsoka dzake.+ 8 Simukai, haiwa Jehovha, muuye kunzvimbo yenyu yekuzororera,+Imi neAreka yesimba renyu.+ 9 Vapristi venyu ngavapfeke kururama,Uye vanhu venyu vakavimbika ngavapembere nemufaro. 10 Nekuda kwemushumiri wenyu Dhavhidhi,Musaramba muzodziwa wenyu.+ 11 Jehovha akapika kuna Dhavhidhi;Haazoregi kuita zvaakataura paakati: “Mumwe wevana vako,Ndichamuisa pachigaro chako cheumambo.+ 12 Kana vanakomana vako vakachengeta sungano yanguNezviyeuchidzo zvangu zvandinovadzidzisa,+Vanakomana vavowoVachagara pachigaro chako cheumambo nekusingaperi.”+ 13 Nekuti Jehovha akasarudza Ziyoni;+Akarida kuti ariite nzvimbo yake yekugara achiti:+ 14 “Iyi ndiyo nzvimbo yangu yekuzororera nekusingaperi;Ndichagara pano,+ nekuti ndizvo zvandinoda. 15 Ndicharikomborera nezvekudya zvakawanda;Ndichagutsa varombo varo nechingwa.+ 16 Ndichapfekedza vapristi varo ruponeso,+Uye vanhu varo vakavimbika vachapembera nemufaro.+ 17 Ndichaita kuti simba* raDhavhidhi riwedzere imomo. Ndakagadzirira muzodziwa wangu rambi.+ 18 Ndichapfekedza vavengi vake nyadzi,Asi korona iri mumusoro wake ichabudirira.”+
^ Kana kuti “Tebhenekeri huru yeAne Simba waJakobho.”
^ Kana kuti “mutebhenekeri yake huru.”